FOWSIYO YUUSUF: “Qurbo-joog badan ayaa dalkii dib ugu laabtay kuwaas oo howlo Ganacsiyo iyo howlo kale ka billaabay” |
FOWSIYO YUUSUF: “Qurbo-joog badan ayaa dalkii dib ugu laabtay kuwaas oo howlo Ganacsiyo iyo howlo kale ka billaabay”
Axad, November 17, 2013 — Wasiiradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ku sugan dalka Kuwait ayaa waxay xalay iyada iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan waxay kulan la yeesheen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool.
Fowsiyo oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay xilliga aad uga wanaagsan tahay sidii hore, iyadoo xustay in dowladda Soomaaliya ay howlo badan ka qabatay dhinacyada horumarinta dhaqaalaha, amniga iyo xiriirka caalamka ay la leedahay.
“Qurbo-joog fara badan ayaa dib ugu laabtay dalkii, kuwaasoo ganacsiyo iyo howlo kale ka billaabay, waxaana ka furan xilligan Muqdisho ku dhawaad 30 safaaradood oo ay ka mid yihiin kuwa Shiinaha, Turkiga, Imaaraadka iyo kuwo kale,” ayay tiri Fowziyo Yuusuf.
Sidoo kale, wasiiraddu waxay sheegtay in Soomaali badan oo dibadaha dalka wax ku bartay ay dib ugu laabteen dalkooda si ay ugu faa’iideeyaan dadka Soomaaliyeed, iyadoo jaaliyadda Kuweit ku boorrisay inay iyaguna qayb ka noqdaan Soomaalida dib ugu laabanaya dalka.
“Dowladdu dadaallo badan ayay sameysay halkii sano ee ay jirtay, waxaana ka mid ah in xiriirrada caalamka la adkeeyay, in dhaqaalaha dalka dib loosoo celiyay iyo in amniga la sugo, taasoo ay caddey u tahay in dalka dib loogu laabanayo,” ayay tiri wasiiradda.
Wasiirka Maaliyadda oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in muddadii halka sano ahayd ee ay dowladdu jirtay la qabtay howlo badan, isagoo intaa ku daray in xukuumaddu ay howl ka billowday meel aan muddo hal sano ah wax looga qaban karin, balse uu Alle ku guuleeyay inay wax badan qabtaan.
“Maanta oo ay 16-ka Novem. (Shalay) ayay ahayd markii golaha wasiirada la magacaabay, waana sannadguuradeennii ugu horreysay, howlo badan ayaana noo qabsoomay,” ayuu yiri wasiirka oo jaaliyadda u sheegay in dib lo soo celiyay hannaankii dhaqaalaha dalka ayna dalkooda maal-gashan karaan.
Ugu dambeyn, waxaa goobta ka hadashay gabar ka mid ah qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kuwait iyadoo sheegtay inay kaga mahad-celinayso wasiiradda Soomaaliyeed sida ay ugu dhabar-adaygeen sidii ay dalka wax uga qaban lahaayeen, iyaguna ay rajeynayaan inay dalka dib ugu laabtaan.